बत्ती मुनी अँध्यारो : तम्घास नजिकैको बुढीचौरमा मोटरबाटो खन्दै स्थानीयवासी ! – ebaglung.com
बत्ती मुनी अँध्यारो : तम्घास नजिकैको बुढीचौरमा मोटरबाटो खन्दै स्थानीयवासी !
२०७४ कार्तिक ८, बुधबार १८:५२	Top News, थप समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७४ कात्तिक ८ । ५० औं वर्ष अघि देखि गुल्मीको सदरमुकाम तम्घास रहेको र गणतन्त्र पश्चात रेसुङ्गा नगरपाललिका बनेको स्थान नै विकास निर्माणमा वत्ति मुनिको अँध्यारो रहेको छ । सदरमुकाम भित्र रहेको रेसुङ्गा नगरपालिकाको अधिकांश टोलहरु सम्म मोटर बाटो अझै पुगेको छैन् ।
विगतका गाविस भित्रको त कुरै नगरौ सविकको सदरमुकाम तम्घास भित्रैका अधिकांस टोलहरुमा मोटरबाटो सुविधा पुगेको छैन् । त्यो मध्येको एक हो रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्वर २ को बुढीचौर । बुटवल देखि गाडीमा ल्याएको सरसमान डोकोमा बोकेर माथी घरमा पुराउँदै आएको बुढीचौरवासीलाई उपल्लो तम्घासको चोकबाट मोटरबाटो त खनियो तर प्रभावकारी हुन सकेन ।
सनराईज युवा क्लबको वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गर्दै नेपालीले बाम घटकलाई भोट मागे